Webhutakiti Yakawandisa: Ndiyo Nzira Yakanakisisa Yokuwana Dhiyabhorosi Kubva paIndaneti? - Semalt Inopa Mhinduro
Kuwana deta kubva pawebhu hakusi nguva dzose iri nyore. Iwe pamwe wakaedza zvinhu zvose kuti uwane nzvimbo ine data yaunoda asi haikwanisi kuikanda kana kukopa nekuisa pasi zvayo. Zvisinei, usarega! Kune dzimwe nzira dzakakwirira dzekuwana deta iri mumhando yakakodzera yekuwedzera kushandiswa:
Unogona kuwana data kubva pawebhu-based APIs (shanduro program interfaces). Makombiyuta akawanda ewebhu akaita se Facebook ne Twitter anopa interfaces dzinobvumira kupinda nyore nyore kune data yavo. Zviri nyore kuti uwane zvekutengeserana uye kunyange hurumende inoshandisa iyo interfaces.
Unogonawo kubvisa deta kubva kuPDF. Zvisinei, zvingasava zviri nyore kubva purogiramu iyi yakarongeka yakafananidzirwa nevashanduri. Pane mikana yokuti iwe unogona kurasikirwa nekugadzirisa kwe data inodiwa pakunyorera kubva pa PDF.
Pane nzira yakakwirira yekubvisa data yewebhu - kubvisa deta uchishandisa webhusaiti content scraper .
Nei Uchifanira Kushandisa Webhudhiro Yenyaya Yakawandisa?
Tichifunga nezvekuchinja kwezvinhu zviripo paIndaneti pamwe nekuoma kwewebhu-based platforms, kune zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti iwe ufunge kushandisa webhusaiti scraper kuti uwane ruzivo rwaunoda. Heino mhedziso shomanana dzezvikonzero izvi:
Kudimbura nzvimbo isina tsanga
Kuyera-kuregera chimwe chinhu chaunofanira kufunga paunosarudza nzira yekuwana deta kubva mumambure. Mukuita, zvinoreva kugadzirisa muganhu pane nhamba nguva apo muenzi anogona kupinda panzvimbo asi asingafungi seDDoS (kuparadzirwa kwekushandira kwebasa. ) kurwisa. Kana iwe uchida kuwana zvakanyanya kubva pane zvaunoita zvechikwata chiitiko, shandisa zvakanaka web content content scraper . Nzvimbo dzakawanda dzemasimiti hadziviriri zvinyorwa zvadzo kubva kune zvinyorwa zvekuti iwe unogona kuwana ruzivo rwaunoda pasina chero dambudziko.
Ramba usingazivikanwi iwe uchitsvaga
Kana iwe uchida kuwana dhiyabhorosi kubva pawebhu pamba, web scraping ndiyo nzira yakanakisisa yekuita nayo. A web content scraper inokubvumira kuita zvikumbiro zveHTTP zviri nyore usingabhadhari. Kunze kwekiki yako uye kero ye IP, hapana chimwe chinhu chinogona kutungamirira nzvimbo ye admin.
Kushandura kweWebhu kunokuwana iwe data inowanikwa nyore nyore
Kugadzirwa kwewebhu hakusi yesayenzi. Hapana chikonzero chekutaurirana chero munhu ari musangano kana kumirira nzvimbo yekuvhura API. Ingoona mamwe maitiro ekuwana maitiro uye iwe web content scraper ichaita yese yebasa.
Unogona kushandisa web scrapers kuti utore zvese zvinyorwa kubva kune imwe nzvimbo. Icho, saka, iyo nzira yakanakisisa yekuwana dhiyabhorosi kubva pahutano ichienzanirana nedzimwe nzira dzekutsvaga deta. Nenguva inotevera iwe uchida kuwana chero dhiyabhorosi kubva pawebhu, shandisa web content scraper uye basa rako richava nyore uye rinonakidza kupfuura kare Source .